About Us - China Golden Door Technology Co., Ltd.
Ulele Seal Iminyango
Mechanical Seal Iminyango
Bio-ukuphepha Pass Ibhokisi
VHP Pass Ibhokisi
Sibekezele Igumbi Iminyango
Ukusebenza Igumbi Iminyango
X-ray Igumbi Iminyango
CT Igumbi Iminyango
PET & CT Iminyango
Hola Glass lwe-Windows
PU Panel Cindezela Umshini
Hola Iminyango ujenga
Personal Kushisa bhé kule ndawo Avikelayo
Hola Ithole nge-Goggle
Ukuhola iphinifa Umnikazi
x-ray ifilimu umbukeli
x-ray ikhomba ukukhanya
Kutholwe e Ningbo, elihle ethekwini edolobheni e-South East China, Golden Door Technology iye ezikhethekile ukuhlinzeka umnyango izixazululo zemithi, izibhedlela, izimboni enuzi kanye ifriji izimboni kusukela ngo-2009 Sine cishe iminyaka eyishumi isipiliyoni ukuklama nokuthunga yokukhiqiza izinhlobo ezahlukene iminyango for imithi, laboratories Biosafety, ukusebenza amakamelo,-X-ray amakamelo, CT amakamelo, ama-PET / CT amakamelo, i-MRI amakamelo, amakamelo ahlanzekile, amakamelo ezibandayo futhi izicelo zenuzi.
Ngaphambi isiqalo iphrojekthi, ithimba lethu itholakala ingakusiza ngokukhetha iminyango efanele njengoba ngamunye izicelo ezahlukene. Sihlela, ukukhiqiza futhi ufake iminyango yethu ngawe. Sinikeza lonke ekuphileni ngemva yokuthengisa service ngoba iminyango yethu.
Eminyakeni eyishumi edlule, izinkulungwane iminyango yethu isifakiwe amaphrojekthi ezahlukene emhlabeni wonke futhi kwamukelwa kahle imakethe. Sine eside nabo ebhizinisini e-Australia, e-Middle Africa, South Africa, Middle East nase-South Asia. izinkampani abaningi sezisungule ubuhlobo ibhizinisi eside nathi ngenxa imikhiqizo yethu okunokwethenjelwa namasevisi.
Umnyango Golden akagcini ngokunikeza iminyango, kodwa futhi bathole ezinye izinto ezihlobene for amaklayenti ethu njengendlela value added elilodwa-stop service. Siyabonga ozakwethu esikhathini eside ibhizinisi, sinalo ezingasho souring nakho futhi ukusiza amaklayenti ethu ne service ligugu.
Golden Door Team kuyoba njalo lapha ukunikeza ezinhle umnyango izixazululo nezinto ezihlobene amaphrojekthi akho.
Iselula Whatsapp: 86-15990207615
Cha 777 Rili Ephakathi Road Yinzhou Ningbo China
Izindaba ezimnandi ezivela phesheya